अक्टोबरमा अन्तिम डिभी, अमेरिकामा हुनेले पनि भर्न पाइने (भिडियो) - Khasokhas Weekly
अक्टोबरमा अन्तिम डिभी, अमेरिकामा हुनेले पनि भर्न पाइने (भिडियो)
डिभी लोटरी, रोजगारमा आधारित ग्रिनकार्ड र दाजुभाई तथा दिदीबहिनीहरुले समेत पाउने पारिवारिक ग्रिनकार्डको नियम कम्तीमा थप १ बर्ष कायम हुने भएको छ । अर्थात् आगामी अक्टोबर १ देखि सुरु भई सन् २०१८ को सेप्टेम्बर मसान्तमा समाप्त हुने अमेरिकी आर्थिक बर्ष २०१८ का लागि डिभी लोटरी पनि कायम हुने भएको छ भने रोजगारमा आधारित ग्रिनकार्ड र दाजुभाई तथा दिदीबहिनीहरुले समेत पाउने पारिवारिक ग्रिनकार्ड समेत फाइल गर्न पाइने भएको छ ।
अमेरिकी संसदले सेप्टेम्बर मसान्तभित्र यससम्बन्धि विधयेक पारित गर्न नसकेपछि डिभी लोटरी, रोजगारमा आधारित ग्रिनकार्ड र दाजुभाई तथा दिदीबहिनीहरुले समेत पाउने पारिवारिक ग्रिनकार्डको अवधि एकबर्ष लम्बिएको हो । आर्थिक बर्ष २०१८ भित्र संसदमा रहेको यससम्बन्धि विधयेक पारित भएमा सन् २०१८ को अक्टोबर १ बाट डिभी लोटरी खारेज हुनेछ भने रोजगारमा आधारित ग्रिनकार्डको प्रकृया समाप्त भई प्वाइन्ट सिस्टम लागु हुनेछ । त्यस्तै अहिलेसम्म अमेरिकी नागरिकता प्राप्त गरिसकेकाहरुका दाजुभाई र दिदीबहिनीहरुले पाउदै आएको ग्रिनकार्डको नियम पनि खारेज गरिनेछ ।
डिभी खुलिसकेपछि यो लिंकमा गएर डिभी लोटरी भर्न सकिनेछ ।
सम्भवत अन्तिम डिभी
नयाँ कानुन बन्न नसकेपछि आगामी अक्टोबरको पहिलो साता डिभी लोटरी खुल्ने भएको छ । तर यो डिभी लोटरी नै सम्भवत अन्तिम डिभी लोटरी हुने न्युयोर्कका चर्चित कानुन व्यवसायी केशवराज सेडाईले जानकारी दिनुभएको छ । विगत केहीबर्ष देखि नै डिभी लोटरी खारेज हुने चर्चा चल्दै आएपनि यो बर्ष भने आर्थिक बर्ष सन् २०१९ का लागि डिभी लोटरी खुल्ने भएको छ । गतबर्ष अक्टोबर ४ मा खुलेको डिभी लोटरीमा अक्टोबर ७ सम्म आवेदन दिन सकिने व्यवस्था गरिएको थियो । अहिलेपनि त्यही आसपासमा डिभी लोटरी खुल्ने भएको छ ।
त्यसको परिणाम सन् २०१८ को मे महिनाको पहिलो साताबाट आउन थाल्नेछ भने विजेताहरुले सन् २०१८ को अक्टोबरबाट अर्थात् आर्थिक बर्ष २०१९ सुरु हुनासाथ भिसा पाउन सुरु गर्नेछन् । उनीहरुले सन् २०१९ को सेप्टेम्बरको अन्त्यसम्म भिसा पाउनेछन् । त्यसपछि भने डिभी लोटरी कार्यक्रम सधैका लागि अन्त्य हुनसक्ने जनाइएको छ ।
सन् २०१८ का विजेताले अक्टोबर १ बाट भिसा पाउने
गतबर्षको अक्टोबरको २ देखि ७ सम्म डिभी लोटरी भरेर गत मे २ को परिणाम अनुशार डिभी लोटरीका विजेताहरुले आगामी अक्टोबर १ बाट भिसा पाउन सुरु गर्नेछन् । सन् २०१८ का लागि डिभी लोटरी परेका नेपालीहरुमध्ये पहिलो महिना अक्टोबरमा ७५० सम्म केस नम्बर हुने नेपालीहरुलाईमात्र भिसा उपलब्ध गराइने अमेरिकी सरकारको डिपार्टमेन्ट अफ स्टेट ब्यूरो अफ कन्सुलर अफेयर्सले जनाएको छ ।
डिभी परे नपरेको यो लिंक मार्फत चेक गर्न सकिनेछ ।
अहिलेसम्मको इतिहासहेर्दा झण्डै ५० हजार नेपालीहरुलाई डिभी लोटरी परिसकेको छ । सन् २०१८ का लागि ४०९७ जना नेपालीहरुलाई डिभी लोटरी परेको छ । चालु आर्थिक बर्ष २०१७ का लागि भने ४ हजार नेपालीहरुलाई डिभी परेको थियो ।
त्यस्तै सन् २०१३ का लागि भरिएको डिभी चिठ्ठामा ४३७० नेपालीलाई यो चिठ्ठा परेको थियो भने सन् २०१४ का लागि भरिएको डिभी चिठ्ठामा ६ हजार ८२ नेपालीलाई यो चिठ्ठा परेको थियो । सन् २०१५ का लागि भरिएको डिभी चिठ्ठामा ४ हजार ९ सय ९१ जना छनौट भएका थिए । सन् २०१६ का लागि भरिएको डिभी चिठ्ठामा ३८ सय १ जना नेपाली छनौट भएका थिए ।
डिभी बन्द गर्ने विधयेक अप्रिल अगाडि पारित हुने सम्भावना
डिभी लोटरी, रोजगारमा आधारित ग्रिनकार्ड र दाजुभाई तथा दिदीबहिनीहरुले समेत पाउने पारिवारिक ग्रिनकार्डको नियम खारेज गर्ने विधयेक सन् २०१८ को अप्रिल अगाडि नै पारित हुने सम्भावना रहेको छ । सिनेटरहरु टम कटन र डेभिड पर्डयुले अमेरिकी सिनेटमा अध्यागमनबारेको यो विधयेक पेश गरिसकेका छन् । अमेरिकन इमिग्रेशन फर स्ट्रोंग इम्प्लोइमेन्ट नाम दिइएको यो विधयेक पारित भएमा अमेरिकाको इमिग्रेशन इतिहासमा शताब्दीकै ठूलो परिवर्तन हुनेछ ।
विधयेकमा मुख्यतया तीनवटा विषयहरु समेटिएका छन् । पहिलो, यो विधयेक पारित भएमा क्यानडा र अष्ट्रेलियाले अपनाएको जस्तै प्वाइन्ट सिस्टममा भाषा, शिक्षा र योग्यताका आधारमा ग्रिनकार्ड प्रदान गरिनेछ । यो प्रणालीले अमेरिकी अर्थतन्त्रमा योगदान दिनसक्नेलाई प्राथमिकता दिनेछ । आवेदकले शिक्षा, भाषा क्षमता, उच्च तलब पाउने जागिरको अफर, उमेर, अति दक्ष उपलब्धीको रेकर्ड लगायतका आधारमा प्वाइन्ट प्राप्त गर्नेछन् । निश्चित प्वाइन्ट प्राप्त गर्ने १ लाख ४० हजारले बर्षेनी यो ग्रिनकार्ड प्राप्त गर्नेछन् । यसरी प्वाइन्ट सिस्टमबाट रोजगारमा आधारित भिसा पाउनका लागि आवेदकले कम्तीमा ३० प्वाइन्ट प्राप्त गर्नुपर्नेछ ।
दोश्रो, यो विधयेक पारित भएमा अमेरिकी नागरिकताप्राप्त व्यक्तिका २१ बर्ष पुगेका छोराछोरी र दाजुभाईदिदीबहिनीले पाउने ग्रिनकार्डको कोटा खारेज गरिनेछ । तर दम्पत्ति र १८ बर्ष नपुगेका छोराछोरीका लागि भने ग्रिनकार्ड आवेदन दिन सकिनेछ । पहिलेजस्तो २१ बर्ष नपुगेकाहरु ग्रिनकार्डका लागि आवेदन दिन योग्य हुनेछैनन् । यो विधयेक पारित भएमा अमेरिकी नागरिकताप्राप्त व्यक्तिका बुबाआमाले समेत अमेरिकाको ग्रिनकार्ड आवेदन गर्न पाउने छैनन् । बरु उनीहरुका लागि हेरचाहको उद्देश्यका लागिमात्र रिन्यु गर्न मिल्ने खालको अस्थायी भिसाको व्यवस्था गरिनेछ । त्यस्तै आप्रवासी भिसामा अमेरिका आउन लागेका अमेरिकी नागरिकका हजुरबा तथा हजुरआमा यो विधयेक लागु भएको एकबर्ष्भित्र आउने तय भएको खण्डमा उनीहरु अब अमेरिका आउने पाउनेछैनन् ।
तेश्रो, हरेक बर्ष ५० हजार आप्रवासी अमेरिका भित्राउने डिभी लोटरी जालसाजीले भरिएको भन्दै यो कार्यक्रम बन्द हुनेछ । यो कार्यक्रमको कुनै मानवीय र आर्थिक लक्ष्य नभएको तथा डाइभर्सिटीको समेत प्रवद्र्धन नगरेको भन्दै यो कार्यक्रम सम्पूर्ण रुपमा बन्द गरिनेछ । चौथो, यो विधयेक पारित भएमा हरेक बर्ष ५० हजारभन्दा धेरै शरणार्थीहरु अमेरिकामा भित्राइने छैन ।
अमेरिकामा बस्नेले कसरी भर्ने ? परे के गर्ने ?
नेपाल अमेरिका अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र महोत्सव २०१८ घोषणा, आवेदन खुला
रेसुङ्गामा सेनाले पुर्‍यायो ट्रान्सफरमर
डेढ वर्षभित्र फेवातालदेखि सराङकोटसम्म केवलकार निर्माणको सम्झाैता
नेपाली सेनाको वीरभद्रजंग गुल्मले जिल्लाको रेसुङ्गामा विद्युतीय ट्रान्फरमर पुर्‍याएको छ..
६ मंसिर, पोखरा । फेवाताल किनार सेदी बगरदेखि सराङकोटसम्म केबलकार निर्माणका लागि मंगलबार..
ओलीले भने-कसैसँग भ्रष्ट्राचारी भन्ने तागत छ, म बहस गर्न तयार छु
६ मंसिर, बुटवल । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा अोलीले सबै नेतालार्इ भ्रष्ट्राचारीको सूचीमा नराख्न..
प्रदेश नं. ५ मा मुख्यमन्त्रीको दौड
नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट भावी मुख्यमन्त्रीको रुपमा कसैलाई चर्चामा नल्याइए पनि डिल्ली..
नेपाल—अमेरिका अन्तराष्ट्रिय चलचित्र महोत्सवको दोस्रो संस्करण २०१८ मे १८ देखि २० सम्म..